ခရီးသှားရငျး ကော့ဂရိတျ မွို့မှာ ယာဉျတိုကျမှု ဖွဈခဲ့တဲ့ အဆိုတျော အသေငျခြိုဆှေ – Askstyle
ခရီးသှားရငျး ကော့ဂရိတျ မွို့မှာ ယာဉျတိုကျမှု ဖွဈခဲ့တဲ့ အဆိုတျော အသေငျခြိုဆှေ
အသေငျခြိုဆှဟော အခဈြအလှမျးသီခငျြးလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေငျထဲမှာ နရောယူထားတဲ့ အဆိုတျောမလေးတဈဦးဖွဈပါတယျ…သူမရဲ့ သီခငျြးတှဟော ဆိုရငျ ပရိသတျတှရေဲ့ နှုတျဖြားမှာ လိုကျပါသီဆိုခဲ့ကွတဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့တာပါ….အသံခြိုခြိုလေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အသေငျခြိုဆှဟော လကျရှိမှာတော့ သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးနဲ့အတူ ဘဝခရီးလမျးကို ပြျောရှငျစှာဖွတျသနျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ…
ပွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငျဘာ ၉ ရကျနမှေ့ာတော့ အနုပညာအလုပျတှအေတှကျ နယျဘကျသှားရငျး မမြှျောလငျ့ဘဲ ကားအကျဆီးဒငျ့တဈခုနဲ့ ကွုံခဲ့ရပါတယျ… အဲတာကတော့ မွဝတီအဆငျး ကော့ကရိတျအကြျောမှာ ကားအကျဆီးဒငျ့တဈခု ဖွဈခဲ့တာပါ….
လူကဘာမှမဖွဈပမေဲ့ ကားအရှတေ့ခွမျးလုံး စုတျသှားတယျလို့ သိရပါတယျ….ဒါ့အပွငျ နောကျထပျအခကျအခဲတဈခုဖွဈတဲ့ မွဝတီကနေ ကားရှိတဲ့နရောကို ပွနျအဆငျးမှာ ကားငှားရာမှာလညျး ကားခဈေးတှမေတနျတဆတောငျးတာနဲ့ ကွုံခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ…….ကားအကျဆီးဒငျ့ကွုံရာမှာလညျး အရှကေ့ ဆိုငျကယျနဲ့ ကားတဈစီးက ကိုးရို့ကားယားဖွဈပွီး နောကျဆုံးသူမကားက အသားလှတျခံရတယျလို့ ဆိုပွီး ရငျဖှငျ့ခဲ့တာပါ…
ဒီအကွောငျးလေးတှကေိုတော့ သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ တငျထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ…ပရိသတျကွီး တို့လညျး အခကျအခဲတှကွေုံနရေတဲ့ အသေငျခြိုဆှတေဈယောကျ အဆငျပွပေါစလေို့ ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော..
အေသင်ချိုဆွေဟာ အချစ်အလွမ်းသီချင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာ နေရာယူထားတဲ့ အဆိုတော်မလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်…သူမရဲ့ သီချင်းတွေဟာ ဆိုရင် ပရိသတ်တွေရဲ့ နှုတ်ဖျားမှာ လိုက်ပါသီဆိုခဲ့ကြတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ….အသံချိုချိုလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အေသင်ချိုဆွေဟာ လက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးနဲ့အတူ ဘဝခရီးလမ်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေအတွက် နယ်ဘက်သွားရင်း မမျှော်လင့်ဘဲ ကားအက်ဆီးဒင့်တစ်ခုနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်… အဲတာကတော့ မြဝတီအဆင်း ကော့ကရိတ်အကျော်မှာ ကားအက်ဆီးဒင့်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တာပါ….
လူကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ ကားအရှေ့တခြမ်းလုံး စုတ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်….ဒါ့အပြင် နောက်ထပ်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြဝတီကနေ ကားရှိတဲ့နေရာကို ပြန်အဆင်းမှာ ကားငှားရာမှာလည်း ကားခဈေးတွေမတန်တဆတောင်းတာနဲ့ ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…….ကားအက်ဆီးဒင့်ကြုံရာမှာလည်း အရှေ့က ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကားတစ်စီးက ကိုးရို့ကားယားဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးသူမကားက အသားလွတ်ခံရတယ်လို့ ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်ခဲ့တာပါ…
ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုတော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ပရိသတ်ကြီး တို့လည်း အခက်အခဲတွေကြုံနေရတဲ့ အေသင်ချိုဆွေတစ်ယောက် အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..